YEYINTNGE(ကနဒေါ): ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရေးခဲ့ရိုးမှန်ရင် စ၀်ရွှေသိုက်ဟာ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတော်သမတ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရေးခဲ့ရိုးမှန်ရင် စ၀်ရွှေသိုက်ဟာ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတော်သမတ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိ
၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေမှာ ၅၉(စ) - ချွေးမ၊ သမက်ဟာ နိုင်ငံခြားသားမဖြစ်ရဘူးလို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရေးခဲ့ရိုးမှန်ရင် စ၀်ရွှေသိုက်ဟာ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတော်သမတ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ပါလီမန်လွှတ်တော်ဥက္ကဌဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့သမီးစပ်စန္ဒာရဲ့ ခင်ပွန်း (Peter Sims ) ဟာ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်နေလို့ပဲ
[ အခုပြောနေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသစ္စာခံမဖြစ်ရဆိုတာ ၁၉၄၇ ဥပဒေမှာ ပါလီမန်အမတ်... " ကိုယ်တိုင်"... အတွက်သာ ရည်ညွန်းတာ ဖြစ်ပြီး .." ဇနီး၊ခင်ပွန်း၊သား၊ သမီး၊ သားမက်၊ ချွေးမနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး"... ဆိုတာ ပထမဆုံး သမတကြီး၊ နောက် ၁၉၆၂ အထိ အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဖြစ်ခဲ့သူ စပ်ရွှေသိုက်က သက်သေခံနေပါတယ်။ ]
The Moon Princess ရဲ့ စာမျက်နှာ အပိုင်းအစ များ
May 6, 2014 at 10:15pm
တကယ်တော့.. The Moon Princess ကို ဖတ်နေ တဲ့ အချိန်မှာ..သမိုင်း တွေ.. နိုင်ငံရေး တွေ ထက်.. အမျိုးသမီး တယောက်..ဒါမှမဟုတ်.. ရှမ်း မင်းသမီးတပါး ရဲ့ လူသားဆန်ဆန် ဘ၀ တခု ကို သာ.. ဖမ်းဆုတ် မိ ခဲ့ တာပါ။ စာရေးသူ စ၀်စန္ဒာ ကိုယ်တိုင် ကလည်း ၀န်ခံ ရေးသား ထား ပါတယ်။ သူ့ဖခင် စော်ဘွားကြီး စ၀်ရွှေသိုက် ရဲ့.. မပြေ ခဲ့ တဲ့..သမိုင်း ကြွေး အချက်အလက် တွေ အတွက်.. စာအုပ် တအုပ် ပြုစု ဖို့ လို့ ရည်ရွယ် ခဲ့ ပေမဲ့.. တကယ့် တကယ် မှာ..စာရွက် စာတမ်း အထောက်အထား တွေ အကုန် မရ နိုင် တော့ တာ..မိသားစု တကွဲ တပြား ဖြစ် ခဲ့ တာတွေ ကြောင့်.. နောက်ဆုံး တော့..သူ မှတ်မိ သိမြင် ကြုံတွေ့ ခဲ့ ရ သလောက် နဲ့ .. ကိုယ်ရေး အတ္တုပတ္တိ တအုပ် သာ ဖြစ် သွား ခဲ့ ပါ တယ် တဲ့။ ဒါပေမဲ့ လည်း.. စာဖတ်သူ ကျမ အတွက် တော့.. ညောင်ရွှေ ဟော်နန်း ရဲ့ တောင်ဆောင် တော် ပြတင်း တံခါး တချပ် က နေ.. မြင်လိုက် ရ တဲ့.. သမိုင်း မြင်ကွင်း တခု ဆို လည်း .. မမှား နိုင် ပါ ဘူး။
( Draft ထဲ မှာ..အဲဒီလို နိဒါန်း ချီ ထား ပြီး… ဆက်မရေး ဖြစ်ပဲ.. ဖြစ်နေ တဲ့.. The Moon Princess စာအုပ် ကလေး အကြောင်း .. အခု ဘယ်လို မှ ဆက်ရေး လို့ မရ တော့ တာ နဲ့.. စကန် ဆွဲ ထား တဲ့ ပုံလေး တချို့ နဲ့.. စိတ်ဝင်စားစရာ အကျဉ်း တချို့ပဲ ဝေမျှ လိုက် ပါတယ်။ )
တကယ်တော့.. ဒီစာအုပ် ထဲ မှာ.. အမျိုးသမီး ၆ ယောက် ကြား မှာ ပတ်သတ် ဆက်နွယ် ဖြစ်ပေါ် နေ ခဲ့ တဲ့..လူသား ဆန် တဲ့ ခံစားချက် တွေ.. အကြောင်း ကို ပို ပြီး စိတ်ဝင်စား ခဲ့ မိတယ်။
Living inapolymanous family ဆိုပြီး အခန်း တခန်း သီးသန့် ရေး သား ထား တဲ့ အပြင်.. စာ အုပ် တအုပ် လုံး မှာ ဖြန့်ကျက်ပြီး ပါ နေ တဲ့.. အဖေတူ အမေကွဲ မောင်နှမ ၁၂ ယောက် နဲ့.. မိသားစု အကြီး ကြီး ရဲ့ အကြောင်းက.. စိတ်ဝင်စား စရာ တွေ နဲ့ ပြည့်နှက် နေ လေ တယ်။
တကယ်တော့.. စ၀်ရွှေသိုက် နဲ့ ပတ်သတ်ရင် နောက်ဆုံး မဟာဒေ၀ီ ဖြစ် တဲ့..မဟာဒေ၀ီ စ၀်ဟမ်းခိန်း ကိုသာ SSA ရဲ့ ခေါင်းကိုင် တယောက် အဖြစ် လူသိ များ ကြ တာပါ။ ဒီစာအုပ် ကို ဖတ် လိုက် တော့မှ.. ပထမဆုံး မဟာဒေ၀ီ စပ်နန်းရီ.. စ၀်နန်းစန္ဒာ..နန်းညွှန့်မေ..နန်းမြ၀င်း ဆိုတဲ့.. စော်ဘွား ကြီး ရဲ့ အိမ်ထောင် လေး ဆက်..ညီအမ လေးဖော် အကြောင်း ကို သိလိုက် ရတယ်။ စ၀်စန္ဒာ က တော့..ဒုတိယ အိမ်ထောင် ဖြစ်တဲ့..စ၀်နန်းစန္ဒာ ရဲ့ သမီး ဖြစ်ပြီး.. သူငယ်စဉ် ဘ၀ မှာပဲ.. မိခင် ဖြစ်သူ ဖျားနာ သေဆုံး သွားတဲ့ အတွ ကြောင့်.. ကြီးဒေါ် ဖြစ်တဲ့..မဟာဒေ၀ီ က..သူ့သားကြီး ၂ယောက် နဲ့ အတူ ကြည့်ရှူ ခဲ့ တာ..အတော်ကြီး တဲ့ အထိ အမေ အရင်း လိုပဲ ထင်နေ ခဲ့ သတဲ့။ နောက် တော့..မဟာဒေ၀ီ လည်း ဖျားပြီး သေဆုံး ပြန်တော့.. ကျန်ခဲ့ တဲ့ မောင်နှမ သုံးယောက် ကို ကြည့်ရှု ဖို့ အတွက်.. လက်ကျန် ညီအမ အငယ် ၂ ဖော် လည်း ဟော်နန်း ကို ရောက် လာ ခဲ့ ဟန် တူပါ ရဲ့။ တကယ်တော့ အဲဒီ ညီအမ လေးဖော် က.. ညောင်ရွှေ ဟော် က.. အခွန် ဘဏ္ဍာ ရေး ၀န် တယောက် ရဲ့ သမီး တွေ မို့..စော်ဘွား အနွယ် တွေ မဟုတ်တဲ့ အတွက်.. ခိုက်တယ် လို့ လည်း ပတ်ဝန်းကျင် က..ယူဆ ကြ သတဲ့။
အဲဒီ အထဲ မှာ.. ဒေါ်ဒေါ် လို့ အားလုံးက ခေါ်ကြတဲ့..တတိယ ညီမ နန်းညွန့်မေ ရဲ့.. ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံ တချို့ကို ကြည့် ပြီး.. သူ့ဘ၀ ကို ပိုပြီး ဂရုဏာ သက်နေ မိ တယ်။ သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင် သားသမီး မစီးပွား ခဲ့ ပေမဲ့.. အမ ၂ ယောက်က မွေးတဲ့.. စ၀်စန္ဒာ တို့ မောင်နှမ သုံးယောက် ရဲ့ တာဝန် တွေကို ယူ ရ တဲ့ အပြင်.. စော်ဘွား ကြီး ရဲ့.. အနွံအတာ ကို လည်း အတော် ခံ ရ ပုံ ပေါ် ပါတယ်။ နောက် တော့.. စော်ဘွားမျိုး နွယ်ခြင်း မဟာမိတ်ပြု ပြီး မဟာဒေ၀ီ ဖြစ်လာ တဲ့..စ၀်ဟမ်းခိန်း ရောက်လာ တဲ့ အခါ..တောင်ဆောင်တော် သခင်မ ဘ၀ နဲ့..အိမ်ထိန်း လို မျိုး နေ သွား ခဲ့ ရ တာ..။ စ၀်ဟမ်းခိန်း က မွေးတဲ့ ကလေး တွေ ကို ရော..သူ့ညီမ အငယ် ဆုံး နန်းမြ၀င်း က မွေးတဲ့ ကလေး တွေ ကို ရော.. နှလုံးသား ကြီးကြီး နဲ့ တသက်လုံး ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက် သွား တာ တွေ ဖတ် ရ တော့.. မိန်းမ တယောက် ရဲ့ ရင်ထဲ ကို.. သိလို စိတ်..စာနာ နားလည် စိတ် တွေ နဲ့..၀င် ကြည့် နေ မိ တယ်။ သူတို့ ငယ်ငယ်က.. မိသားစု ကြီး ခရီး ထွက် ပြီ ဆိုရင်.. လမ်းမှာ..ဒေါ်ဒေါ်က.. စိန်ခြူးကြာညောင် သီချင်းကို..အမြဲ ညည်း ဆို လေ့ ရှိ တယ် ဆိုတာ ကြောင့် .. ရင်ထဲ မှာ ပို ဆွေး မိ တယ်။ အဒေါ်ငယ် ဒေါ်ဝင်း ကတော့.. ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် မှာ ကျောင်းသွား တက် ပြီး.. သူ့ဘ၀ ကို.. လွတ်လွတ် လပ်လပ် ရွေးချယ် ခွင့် တွေ ရှိနေပါ လျက် နဲ့.. ဂျပန် တွေ ၀င်တော့.. ညောင်ရွှေ ကို ပဲ ပြန်လာ ရ ပြီး.. စော်ဘွား ကြီး အရိပ် အောက်ပဲ ၀င် ခဲ့ တာ ကို လည်း.. အံ့သြဟန် ပြု ရေး ထား လေ တယ်။
ဒီပုံကတော့..မဟာဒေ၀ီ စ၀်ဟမ်းခိန်း ရဲ့.. အဲလစ်ဇဘတ် ဘုရင်မ ကြီး မင်္ဂလာဆောင် ကို တက် တဲ့ ပုံပါ။
အဲဒီ တုန်းက..ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ တော် သမ္မတ ကြီး ဖြစ်ကာစ.. စ၀်ရွှေ သိုက် နဲ့ မဟာဒေ၀ီ ကို.. တော်ဝင် မိသားစု က..ဖိတ်ကြား တော့.. စ၀်စန္ဒာက.. မဟာဒေ၀ီ ရဲ့ အဖော် အဖြစ် နဲ့ လိုက်ပါ သွားရင်း.. အင်္ဂလန် မှာ ကျောင်းတက် ကျန် ခဲ့ တာ ဖြစ် တယ် ။ အဲဒီ အချိန် မှာ သူ့အကို ၂ ယောက် ကတော့.. အင်္ဂလန် မှာ ရောက်နှင့် ပညာသင် နေ ခဲ့ ကြ ပြီ ။ ဒီ စာအုပ် ထဲ မှာ စာရေးသူ က.. ကျန်တဲ့.. အမျိုးသမီး တွေ ကို တော့.. အဒေါ် ရင်း တွေ မို့.. ချစ်ခင် ရင်းနှီး စွာ ဖော်ပြ ထား ပေ မဲ့.. မိထွေး စစ်စစ် ဖြစ် တဲ့..မဟာဒေ၀ီ ကို တော့.. သမိုင်း အချစ် ဇာတ်လမ်း စာအုပ် တွေ ကြိုက်တတ် တဲ့.. နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက် ကြီး တဲ့.. အမျိုးသမီး တယောက် အဖြစ် .. ခပ်ခွါခွါ လေးပဲ.. ရေး ပြ သွား တယ်။ အရွယ် ချင်း ကလည်း သိပ် မ ခြားလှ ဘူး ကိုး။ နောက်ပိုင်း မှာ ..သား သမီး တချို့ နဲ့ အတူ ကနေဒါ မှာ..ခေါင်းချ နေထိုင် သွားခဲ့တဲ့.. မဟာဒေ၀ီ စ၀်ဟမ်းခိန်း ရဲ့.. အတ္တုပတ္တိ ဆန်ဆန် စာအုပ် တအုပ် ဟာ.. The White Unbrella ဆိုပြီး.. ဒီ စာအုပ် မတိုင် ခင် အတော် စောစော က..ထွက် ဖူး ထား ပေမဲ့.. ထူးဆန်းစွာ ပဲ.. စ၀်စန္ဒာ ရဲ့.. စာကိုး စာရင်း ထဲ မှာ.. မတွေ့ ရ ဘူး။ ကိုယ်တိုင် ရေး စာအုပ် မဟုတ် တာ ကြောင့် လည်း ဖြစ်မည် ထင် သည်။
၀ဘ်ဆိုဒ် တခု မှာ တွေ့ ရ တဲ့.. မဟာဒေ၀ီ စ၀်ဟမ်းခိန်း ရဲ့..အသက် ၈၀ ကျော် ပုံရိပ် ( ကွယ်လွန်)
စ၀်စန္ဒာ ရဲ့.. ဘိလပ် မှာ ကျောင်းတက် ခဲ့ တဲ့.. ၆ နှစ်တာ ကာ လ တွေ အကြောင်း လည်း ဖတ်လို့ ကောင်းသား ပါပဲ။ အဲဒီ တုန်းက..ခေတ်ပြိုင် ဗမာ ကျောင်းသား တချို့ အကြောင်း ဖတ် ရ တော့.. သြော်… လို့ပဲ.. တွေး မိ လိုက် ရ ပါ တယ်။ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အဘိဓါန် ပြုစု ခဲ့ တဲ့ ဒေါက်တာ ဘဟန် ရဲ့ သမီး ကက်သလင်း ဘဟန်.. သူ့ တ၀မ်းကွဲ.. အဓိပတိ ကြီး ဒေါက်တာ ဘမော် ရဲ့ သား.. ဇာလီမော်…
စ၀်ရွှေသိုက် နောက် သမ္မတ ဖြစ် တဲ့.. သမ္မတကြီး ဒေါက်တာ ဘဦး ရဲ့ သားတွေ ဖြစ်တဲ့.. ရစ်ချက် ဘဦး.. အဲလဘတ် ဘဦး တို့.. ဆို တော့ ကာ….. အင်း..။
နောက် တော့..သူလည်း ဘိလပ် မှာပဲ.. Peter Simms ဆို တဲ့.. အင်္ဂလိပ် တယောက် နဲ့ အကြောင်းဖက် တယ်။ ဟိုလူက.. ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို လေ့လာ လိုက်စား တဲ့… ပညာရှင် တယောက် ။ စနေသမီး ဦး ပီပီ ..လုပ်ချင် ရာ လုပ် ခဲ့ တဲ့..သူ့ကို.. အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးချယ်မူ အပေါ် မှာ လည်း..သူ့ဖခင်က.. သဘော မကျ ခဲ့ ဘူး။ ဒါပေမဲ့..နောက် တော့.. နားလည် လက်ခံ လာ ပြီး..သူတို့ မောင်နှံ..မြန်မာ ပြည် ကို ပြန်လာ ကြ တယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက် ရဲ့..အချစ် ဇာတ်လမ်း မှာ...အဲဒီ တုန်းက..အင်္ဂလန် မှာ နေထိုင် တဲ့.. ဆရာကြီး ဒေါက်တာ လှဘေ က လည်း..တနည်း တဖုံ ပါဝင် နေ ခဲ့ သေးတယ်။
အဲဒီမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာ က.. လန်ဒန် ကနေ .. မြန်မာ ပြည် ရောက် အောင်.. ဒုတ်ဒုတ်ထိ ကုန်းလမ်း ကနေ..ကားမောင်း ပြန်လာ ကြ တာ .. ၆ လ ကြာ သတဲ့..။ သူတို့ ရန်ကုန် ကို ရောက်တဲ့ အခါ.. ကားရဲ့..မီတာ က.. မိုင်ပေါင်း တသောင်း လေးထောင် နဲ့ ငါးရာ နှစ်ဆယ့် နှစ်မိုင် ပြ နေ သတဲ့..။ အတော် အံ့သြ သွား မိတယ်..။.အင်္ဂလန် နဲ့.. မြန်မာပြည် ကို..ကုန်းလမ်း ပေါက်တယ် ဆိုတာ..သတိ မထား မိဘူး။ မြေပုံ တွေ ဘာတွေ ပြန်ကြည့် တော့ မှ.. သြော..ဟုတ်ပေ သား ပေါ့..။ သူ့ အမျိုးသားက တော်တော် လည်း စွန့်စား ချင် တဲ့.. အင်္ဂလိပ် ဖြစ်ပုံ ရ သည် ။
တကယ် ဆက်စပ် ဖတ် ကြည့် တော့ မှ.. အဲဒီ အချိန်က.. Land Rover ကား တွေ စ ပေါ် ကာစ.. overland drive ဆိုတာ ကို လည်း စစ်ကြီး အပြီး မှာ..ဖက်ရှင် တခု လို စွန့်စား မောင်းနှင် ကြ တဲ့ အချိန် ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ သွား တွေ့ရတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော..လွယ် တဲ့ ခရီး တော့ မဟုတ်..။ သူ့စာ ထဲ မှာ.. အဲဒီ တုန်းက.. ဆူးအက်ဇ် တူးမြောင်း ပြသာနာ ပေါ် နေတာ မို့.. သူတို့.. ဂျော်ဒန် ကို ဖြတ်တော့.. အသက် နဲ့ နီး တဲ့.. အခက်အခဲ တွေ တောင် ကြုံ ခဲ့ ရ သတဲ့။
နောက်ပိုင်းလည်း သူ့ အမျိုးသား ပီတာက.. Time တို့ ဘာတို့ မှာ ၊သတင်းထောက် အဖြစ် ဆက်လုပ်တာမို့ နှစ်ယောက်သား အာရှ တိုက်က နိုင်ငံမျိုးစုံမှာ လှည့်လည် ပီး နေထိုင် သွား ကြသည် ။.. လာအို..ထိုင်း.. စင်ကာပူ..ဟောင်ကောင်.. အိုမန်.. အာရှနိုင်ငံ တော်တော်စုံခဲ့တယ်။ သူ့အမျိုးသား ပီတာ ကို ၊ အဲ့ဒီ အချိန် ၊ စစ်အေးကာလ တွေက အနောက်သူသျှို လို့ ထင်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။
လင့်ရိုဗာ ကားကြီး နဲ့..သူတို့ လင်မယား ရန်ကုန် ကို ပြန်ရောက်တော့..ပီတာက.. ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာ ဌါန မှာ စာပြ.. ဒေါက်တာ လုစ် တို့ ဘာတို့ နဲ့.. အဖွဲ့ကျ… သူက.. BBS မြန်မာ့ အသံ မှာ.. သတင်း ကြေ ငြာ တဲ့ အလုပ် လုပ်ရင်း..နေထိုင် ဖြတ်သန်း ခဲ့တဲ့.. နှစ် တွေ တလျှောက်.. ရန်ကုန် မြို့က..အထက်တန်းလွှာ.. လူတန်းစား တချို့ အကြောင်း လည်း အမှတ် တမဲ့ ဆို သလို..ရုပ်ပုံလွှာ ကြမ်းလေး တွေ အဖြစ်.. ဖတ် လိုက် ရ တယ်။ ဥပမာ.. ဗိုလ်စကြာ ..နဲ့.. Purple Plane မင်းသမီး ၀င်းမင်းသန်း တို့ အကြောင်း..။ ကပြား ဖြစ် တဲ့..၀င်းမင်းသန်းက..ဘယ်လို အက ကောင်း ..ဧည့်ခံ ကောင်း လို့.. ဗိုလ်စကြာ တို့ အိမ်က..ပါတီ တွေ ဆိုတာ..လူ အမြဲ စည် တဲ့ အကြောင်း.. ဆို တာမျိုး တွေပါ..။ လွတ်လပ်ရေး ရ ပြီး စ.. မြန်မာ ပြည် မှာ ..အဲဒီ တုန်းက.. အထက်တန်းလွှာ ကပြား တွေ.. အာဏာရ နိုင်ငံရေး သမား တွေ.. လိုင်စင် စီးပွား ရေး သမား တွေ နဲ့.. အတော် လည်း မျက်စိ နောက် စရာ ကောင်း နေ မှာ တော့.. အမှန် ပင်။ ဒီကြားထဲက.. ရိုးရိုးသားသား.. ကြိုးစားအောင်မြင် ရင်း..မြန်မာ ပြည် မှာပဲ တသက်လုံး နေထိုင် သွား ခဲ့ တဲ့.. BBS ဦးလှဘူး တို့ မိသားစု အကြောင်းလေး ကို လည်း တခုတ် တရ .. ရေးထား သေး တယ်။ (ဦးလှဘူး ရဲ့ အမျိုးသမီး အန်တီ အောလစ်ဗ် ဟာ လည်း .. မွန် အင်္ဂလိပ် ကပြား မကြီးပါ။ အခု ထက်ထိ အလုံ ဦးလူနီ လမ်းထဲ မှာပဲ နေထိုင် ပါတယ် )
လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ တွေ့ရတဲ့ စပ်စန္ဒာ
ဒီစာအုပ် မှာ ဖတ်လို့ အကောင်းဆုံး အပိုင်း ကတော့.. ၁၉၆၂ အာဏာ သိမ်းပြီး ..သူ့ဖခင် စ၀်ရွှေသိုက် နေ အိမ်ကို ဦးနေ၀င်း စစ်တပ်က..၀င်စီး တဲ့ အခန်း တွေ ပါ။ ဒါပေမဲ့…အဲဒီ အချိန် မှာ သူတို့ မောင်နှံ က.. နိုင်ငံရေး အခြေအနေ တွေ မကောင်း တော့ လို့.. လာအို ကို ရွှေ့ ပြောင်း နေ ပြီ မို့.. မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ တော့..မ ဟုတ် ဘူး ပေါ့..။ ဗမာ စစ်သား တွေက..`ရှမ်းမ..ထွက်ခဲ့..ထွက်ခဲ့..` လို့ အော် တာ…၊ ၁၇ နှစ်သားပဲ ရှိသေး တဲ့.. သူ့ မောင်လေး..စ၀်မြီမြီသိုက် က..တံခါး ဖွင့် ပြီး ထွက်ကြည့် တဲ့ အချိန်မှာ..တဖက်က..စစ်သား တွေက.. တလစပ် ပစ်ခတ် လို့ သေဆုံး သွား ခဲ့တာ …၊ သူ့ဖခင် ကိုလည်း ချက်ခြင်း..ဖမ်းထုတ် ခေါ်သွား ခဲ့တာ.. တွေကို..မိသားစုဝင် တယောက် အနေ နဲ့..သူမ ဘယ်လောက် ၀မ်းနည်း တုန်လှုပ် ခဲ့ မလည်း ဆိုတာ.. မှန်းဆ ကြည့်ယုံ နဲ့ တင် .. နားလည် လို့ ရ တဲ့.. အခြေအနေ တွေ ပါ..။
ဖတ် မိ ရ ပြန် တော့ လည်း..သူ့ နာကျည်း ကျေကွဲ မူ တွေက.. ရင်ထဲ ထိ ကူးစက် ခဲ့ ရ တယ်။
သူတို့ လင်မယား နှစ်ယောက် နောက်တနေ့ ချက်ခြင်း လေယဉ် နဲ့ ရောက်လာ တော့.. စောင့်ကြည့် ခံ နေ ရ တဲ့ ကြား ထဲ မှာ.. တအိမ်လုံးက..အားကိုး တကြီး စောင့်မျှော် လို့ ။ အိမ်မှာ...အမေ က မရှိ.. အဖေ ကိုလည်း ဖမ်းသွား ခဲ့ ပြီ။ သားတယေက် ပြစ်သတ် ခံ လိုက် ရ ပြီ။ ကလေး အငယ် တချို့က.. ၉ နှစ် ၁၀ နှစ် အရွယ် တွေ။ ဒေါ်ဒေါ်က..သူ့ကို ဖက် ပြီး ငို ။ အရင်က ..လူခြင်း ရင်းနှီး ခင်မင် ခဲ့ တဲ့.. နှုတ်ခမ်းမွေးကြီး ဦးလွင် ကို..ဖုန်းဆက် ပြီး..သူ့အဖေ ကို တွေ့ခွင့် တောင်း တော့.. မဖြစ်နိုင် ပါ တဲ့..။ အဲဒီ နောက် တော့..သူတို့ ဖခင်ကြီး စ၀်ရွှေသိုက် ကို.. သားတယောက် က လွဲ လို့..ဘယ်သူ မှ တွေ့ ခွင့် မရ လိုက် ပဲ.. ၈ လ အကြာ မှာ.. သေဆုံး သွား ပြီ ဆို တဲ့..သတင်း စကား သာ ရောက် လာ ခဲ့ သည်။ စာအုပ် ထဲ မှာ..စ၀်စန္ဒာက နာနာ ကျည်းကျည်း နဲ့.. မေးခွန်း တွေ အများကြီး ..ထုတ်ထား လေ တယ်။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက..ဦးနု ကို တောင် အကျယ်ချုပ်ပဲ ထား ခဲ့ တာ..သူ့ အဖေ ကို တော့.. တလကြမ်း ၀င်ရောက် ဖမ်းစီး ပြီး.. ဘာလို့ အသက် သေ တဲ့ အထိ ဖြစ် စေ ခဲ့ တာ လည်း.. တဲ့။ ဒီလို ကြမ်းကြမ်း တမ်းတမ်း စီးနင်း ပြစ်ခတ် ဖို့..ဘယ်လို အကြောင်းတွေ ရှိ ခဲ့ လို့ လည်း တဲ့..။ သူတို့ ..နာကျည်း သင့်ပါ တယ် လေ.။ -
အဲဒီ အချိန် မှာ.. မဟာဒေ၀ီ က.. လန်ဒန် ကို ဆေးကု ဖို့ ရောက် နေတယ် ဆိုတော့.. ဒါဟာ လည်း..အခြေအနေ တွေကို မှန်းဆ မိ လို့.. ကြိုတင် ရှောင် နေ ခဲ့ တာလည်း ဖြစ် ပေ မည်။ လွှတ်တော် ထဲ မှာ အမတ် တနေရာ ရ လိုက်တဲ့..မဟာဒေ၀ီ ရဲ့.. ပရိယာယ်ေ၀၀ုစ် မပါ တဲ့.. ရှမ်းအရေး တောင်းဆိုမူ တွေ ကလည်း.. ဗမာ အများစု ကြီးစိုး တဲ့.. လွှတ်တော် ကြီး ထဲ မှာ.. သတိ ထားမိ စရာ ဖြစ်လာ နေ ခဲ့ တယ် လို့.. စ၀်စန္ဒာ ကိုယ်တိုင် ကလည်း သုံးသပ် ထား တယ်။
နောက်တော့..သူတို့ မိသားစု ကြီး လည်း တကွဲ တပြား..။ စ၀်ရွှေသိုက် အသုဘ ကို တက်ရောက်ဖို့.. လန်ဒန် ကနေ..ပြန် အခေါ် ခံ ရ တဲ့..မဟာဒေ၀ီ လည်း.. သိပ်မကြာ ခင် မှာ ပဲ.. စောင့်ကြည့် နေတဲ့ ကြားထဲ က..ခက်ခက် ခဲခဲ နဲ့.. ကလေးငယ် ၂ ယောက်ကို ခေါ် ပြီး.. ချင်းမိုင် ကို ပြေး..။ သားကြီး သမီးကြီး တွေ ကလည်း.. အဆင် ပြေ သလို.. ရန်ကုန်က ခွါ ကြ..။ တောခို တဲ့သူ က..ခို..။ ရှမ်းပြည် ပြန်တဲ့သူက..ပြန်။
သားသမီး မထွန်းကား တဲ့..စ၀်စန္ဒာ တို့ ဇနီးမောင်နှံ ကတော့.. ဘောက်ဇာ ခွေးကြီး တွေ ကို.. သားသမီး လုပ် လို့.သူတို့ ရဲ့..သမိုင်းဝင် လင့်ရိုဘာ လေး နဲ့.. ကမ္ဘာပတ်ရင်း.. နောက်ဆုံး ပြင်သစ် နဲ့ လန်ဒန် မှာ.. အနားယူ လေ သည်။ သူတို့ အကြာဆုံး နေထိုင် ခဲ့ တဲ့..လာအို နိုင်ငံ နဲ့ ပတ်သတ် လို့.. လာအို ဘုရင်နိုင်ငံတော် ဆို တဲ့ စာအုပ် တအုပ် ကိုလည်း.. ဇနီးမောင်နှံ အတူတူ ရေးသား ပြုစု ထုတ်ဝေ ပြီး သွား ခဲ့သည်။ သူ့ အမျိုးသားကို.. တော်တော် အားကိုး တွယ်တာ ပုံ ရ တဲ့.. စ၀်စန္ဒာ ဟာ… အခု စာအုပ် ကို လည်း.. နှစ်ယောက် အတူတူ ပြုစု ရေးသား နေ ရင်း..၂၀၀၄ ခုနှစ် မှာ..သူ့ခင်ပွန်း ဆုံး သွား တော့.. ဆက်ပြီး မရေး နိုင် တော့ လောက် အောင် ဖြစ်သွား ခဲ့ သတဲ့။
သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ.. စိတ်ဓါတ် ခွန်အား တွေ ကို.. အချိန်အတော်ကြာ ပြန်လည် စုစည်း ပြီး မှ..၂၀၀၈ ခု နှစ်မှာ ထုတ်ဝေ ဖြစ် ခဲ့ တဲ့..ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္တုပတ္တိလေး ရဲ့.. နိဂုံး လေး ကို ဖတ် ရင်း.. ကျမ ရင် ထဲ မှာ လည်း အမျိုးအမည် မသိ တဲ့ ခံစားချက် တချို့ .. ဆို့နင့်လျက်…။
အတိတ် တွေ ဆိုတာ..ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာ တော့ဘူး..
ဒါပေမဲ့.. သတိရ နေ ကြဖို့.. ဆင်ခြင်သုံးသပ် ကြည့် ကြဖို့ နဲ့.. အရာအားလုံး ဟာ..ခရီးယာယီ သာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ..တရားသံဝေဂ ရ နေ ကြ ဖို့ ပါ.. တဲ့။
ကေ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁